Chat Ewebhu Ithuluzi popular evumela ukuthi ukhulumisane in izingxoxo yangasese noma iqembu, enze izwi noma amakholi wevidiyo futhi bahlele izingqungquthela ividiyo.
Izandiso Imvelo akhiphe web-services ngaphandle usebenzisa isiphequluli. Isofthiwe isekela umsebenzi izicelo, imidlalo kanye namathuluzi ukuze uthuthukise ukusebenza.
Easeus Partition Master 11.10 Professional futhi Free
Akwazi ukugcina Isofthiwe ilawula hard disk ngodonga, division yabo noma ukuhlangana, ezinyakazayo, ehlola, ukuguqulwa kanye nokubuyiselwa.
System nokwenza Isofthiwe elungisa amaphutha futhi ahlanze ebhukwini uhlelo. Isofthiwe iqukethe amathuluzi eyengeziwe ngcono ukusebenza computer.
Umhleli Audio Umhleli umsindo iqoqo elikhulu imisebenzi yakhelwe ukuhlela amafayela alalelwayo ezingeni esifanele, ukurekhoda umsindo emithonjeni ehlukene futhi asuse irekhodi zamehlo.
English, Українська, Français, Español... Sleipnir 6.2.4.4000
-Internet Isiphequluli fast esesikhundleni uhla imisebenzi eyisisekelo kanye izilungiselelo yabaningi ngenjongo yokuthethelelwa izintandokazi zakho siqu kanye nezidingo ukuba uyihlole kanjani iwebhu kalula.